मिर्गौला संवेदनशील अंग हो, कसरी जोगाउने? :: डा. भोजराज लुइटेल :: Setopati
डा. भोजराज लुइटेल काठमाडौं, मंसिर १४
मिर्गौला रोगका कतिपय लक्षण दुखेर हुन्छ कतिलाई नदुखी पनि हुन्छ। पत्थरी रहेछ भने कोखा दुख्ने, पिसाबमा रगत जाने हुन्छ। यस्तो बेलामा पिसाबमा रगत जाने र उल्टी हुन सक्छ। तर धेरैजसो 'साइलेन्ट ड्यामेज' हुन्छ। यस्तो भए अत्याधिक टाउको दुख्छ। उच्च रक्तचापले टाउको दुख्छ भने त्यहाँ भएको युरियालगायत पानी सोडियमले गर्दा उल्टी हुने हुन्छ। त्यसपछि अनुहार, आँखाका कोषिका, गोडा, अण्डकोषको छाला सुन्निने हुन्छ। कतिपयलाई छाती दुख्ने अनि स्याँ..स्याँ... हुने हुन्छ। शरीर पहेँलो हुँदै आउँछ। यी सबै धेरै बिग्रिसकेपछि देखिने लक्षण हुन्। सुरुवाती चरणमा त केही थाहा हुँदैन। मिर्गौला ७०/८० प्रतिशत बिग्रिएपछि मात्रै लक्षण देखिन्छ। पिसाबको रङ परिवर्तन हुनु, पिसाब धेरै गन्हाउनु पनि मिर्गौला रोगकै लक्षण हुन्।
यो रोगका विभिन्न चरणहरु हुन्छन्। रिस्कमा पर्नु, चोट लाग्नु, मिर्गौला फेल, मिर्गौलाको काम गर्ने क्षमताको ह्रास र 'इन्डस्टेज' गरी पाँच वटा चरण छन्। यसको कारण पत्ता लगाएर उपचार गर्नुपर्छ। दुइटै किड्नी अथवा पिसाबको नलीमा पत्थरी पर्यो, ट्युमर देखियो भने त्यसलाई फाल्नुपर्छ। यो पनि उपचारको एउटा पद्धती नै हो। ट्युमर छ भने त्यसलाई निकाल्नुपर्छ। पिसाब उम्लेर गएको छ भने त्यसलाई नउम्लिने बनाइदिनुपर्छ। उपचार गर्न मिल्ने कारणहरूको उपचार गर्ने हो। सुगर, प्रेसर नियन्त्रणमा राख्ने हो। जथाभावी नदुख्ने औषधीहरु खानु हुँदैन। पानी ठिक्क मात्रामा पिउनु पर्छ। सन्तुलित रूपमा प्रोटिन मिसिएका खाना खानुपर्छ। अण्डा, माछा, मासु सबै खान हुन्छ तर 'डाइटिसियन'को सल्लाहमा। सुरूवाती चरणमा यसरी नियन्त्रण गर्न सकिए पनि अन्तिमा अवस्थामा पुगेपछि भने डायलासिस वा मिर्गौलाको प्रत्यारोपणमा जानुपर्छ।
(उपप्राध्यापक डाक्टर भोजराज लुइटेल त्रिवि शिक्षण अस्पताल र ग्राण्डी अस्पतालमा कार्यरत छन्।)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १३, २०७६, २१:३०:००